वेबसर्फरद्धारा केबल इन्टरेनेट सेवा सार्वजनिक - Living with ICT
Home / Featured / वेबसर्फरद्धारा केबल इन्टरेनेट सेवा सार्वजनिक
वेबसर्फरद्धारा केबल इन्टरेनेट सेवा सार्वजनिक
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरले काठमाडौंमा जारी क्यान इन्फोटेकको अवसरमा पहिलो पटक केबल इन्टरनेट सेवा सार्वजनिक गरेको छ । उपत्यका र यस नजिकका शहरहरुमा सीधै र सजिलै इन्टरनेट सेवा दिने योजनाअन्तर्गत यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अफरअन्तर्गत वार्षिक ग्राहकका लागि १० प्रतिशत छुट, जडानमा २ हजार छुट, २ महिनाको थप बोनस सेवा र १ हजार मूल्य बराबरको उपहार दिएको वेबसर्फरले जनाएको छ । यसै अवसरमा लिभिङ विथ आइसिटीका उप–सम्पादक शिव बस्नेतले कम्पनीका सिइओ सुमन प्रधानसँग कुराकानी गरेका छन् :
सिइओ, वेब सर्फर कम्युनिकेशन प्रालि
इन्फोटेकको गोल्ड स्पोन्सर वेब सर्फरले प्रर्दशनीमा कस्ता अफर राखेको छ ?
इन्फोटेकको अवसर पारी वेब सर्फरले नयाँ सेवा प्रारम्भ गरेको छ । यसअघि वायरलेस टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर घरघरमा डिएसएल इन्टरनेट दिएकोमा ग्राहकको थप आकांक्षाअनुरुप केबल इन्टरनेट सुरु गरेका छौं । हाम्रा पार्टनर केबल टिभी अपरेटरहरुकै तारबाट यो सेवा लिन सकिन्छ । उपत्यका र यस नजिकका शहरहरुमा सीधै र सजिलै इन्टरनेट सेवा दिने योजनाअन्तर्गत यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अफरअन्तर्गत वार्षिक ग्राहकका लागि १० प्रतिशत छुट, जडानमा २ हजार छुट, २ महिनाको थप बोनस सेवा र १ हजार मूल्य बराबरको उपहार पनि दिइरहेका छौं ।
सेवा र गुणस्तरका हिसाबमा नेपालका आइएसपीहरुको र्‍याकिंङमा वेबसर्फरको पोजिसन कुन हो ?
सेवा र गुणस्तरका आधारमा हामी नै नम्बर वान हौं भन्छौं । ग्राहकको आकांक्षाअनुरुप स्थायी र चुस्त इन्टरनेट सेवा दिन वेबसर्फर स्थापनाकालदेखि नै सफल भएको छ । सबै आइएसपीको अध्ययन गरी लिभिङ विथ आइसिटीले नै टप आइएपसीको छिनोफानो गरिदिए आभारी हुने थिएँ ।
वेबसर्फरको आगामी योजना के के छ ?
देशव्यापी रुपमा केबल टिभीबाट इन्टरनेट दिने कार्यक्रम सफल भएपछि हामी हाइ स्पिड इन्टरनेट फाइबर कनेक्ट (फाइबर टु दी होम) सेवामा प्रवेश गर्नेछौं । यसका लागि पूर्वाधारको काम भइरहेको छ । निकट भविष्यमै यो सेवा सार्वजनिक गरिने छ ।
अधिकांश आइएसपी गाउ जान मान्दैनन् । जान नचाहेको हो या पूर्वाधारको कमीले हो ?
वेबसर्फरको सेवा ६३ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । तर, शहरको तुलनामा गाउमा फास्ट इन्टरनेट सेवा दिन सकिरहेका छैनौं । नेपालको बिडम्बना भनेको आइएसपीले नै काठमाडौंदेखि गाउसम्मको नेटवर्क बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । वास्तवमा पूर्वाधार त राज्यले बनाइदिनु पर्ने हो र इन्टरनेट सेवा आइएसपीले दिनुपर्ने हो । यसर्थ गाउमा आइएसपीको उपस्थिति कम देखिएको हो ।
Previous भायनेट सेवामा भारी छुट र ग्राहक अफर
Next इन्फोटेकको चौथो दिनसम्म साढे २ लाख अवलोकनकर्ता, आइतबार ‘बिजनेस डे’